Sarin'ny Neil Armstrong
Iza moa i Neil Armstrong?
by Lee Joanne Collins, mpanoritra mpanoratra
Ilay lehilahy voalohany handeha amin'ny lalao
Ny 20 Jolay 1969, i Neil Armstrong no lehilahy voalohany nandatsaka ny volana. Izy no komandin 'i Apollo 11, ilay iraka voalohany mba hanao ny volana ho avy. Ny Filoha John F. Kennedy dia nampanantenaina ny 25 May 1961 tao amin'ny adiresy manokana ho an'ny kongresy momba ny maha-zava-dehibe ny habakabaka mba "hiorina lehilahy iray amin'ny volana ary hamerina azy soa aman-tsara eto an-tany alohan'ny faran'ny folo taona." Ny National Aeronautic and Space Ny fitantanana (NASA) dia novolavolaina mba hanatanterahana izany, ary ny fandresen'i Neil Armstrong tamin'ny volana dia noheverina ho "fandresena" an'i Amerika tamin'ny hazakazaka ho an'ny toerana.
Daty: 5 aogositra 1930 - 25 aogositra 2012
Fantatra ihany koa: Neil Alden Armstrong, Neil A. Armstrong
Famelabelarana malaza: "Dingana kely ho an'ny lehilahy iray, goavana iray goavana ho an'ny olombelona".
Fianakaviana sy ankizy
Neil Armstrong dia teraka tao amin'ny toeram-piompiana kamban'ny Dadabe Korspeter akaikin'i Wapakoneta, Ohio, ny 5 aogositra 1930. Izy no lahimatoa tamin'ireo zanaka telo niteraka an'i Stephen sy Viola Armstrong. Niditra an- kerisetra lehibe ny firenena , raha maro ny lehilahy no tsy niasa, fa i Stephen Armstrong kosa dia nanohy nanohy ny asany amin'ny maha-mpanamarina azy ho an'ny fanjakan'i Ohio.
Ny fianakaviana dia nifindra monina avy tao amin'ny tanàna Ohio ho any amin'ny iray hafa raha nandinika ny bokin'ny tanàna sy faritra maro samihafa i Stephen. Niorina tao Wapakoneta izy ireo tamin'ny 1944, ary nahavita sekoly ambaratonga faharoa i Neil.
Mpianatra iray nalaza sy nanan-danja, namaky boky 90 ho an'ny mpianatra voalohany i Armstrong ary nanilika ny ambaratonga faharoa. Nanao lalao baolina sy baolina izy tany am-pianarana, ary nilalao anjomara baritone tao amin'ny tarika tao an-tsekoly; Na izany aza, ny liana voalohany dia tamin'ny fiaramanidina sy ny sidina.
Ny tombontsoa voalohany amin'ny fiaramanidina sy ny habakabaka
Nahaliana an'i Neil Armstrong tamin'ny fiaramanidina ny roa taona. Tamin'izany dia nentin'ny rainy tany amin'ny National Show Show tamin'ny 1932 tany Cleveland izy. Armstrong dia enina raha izy no nitondra ny fiaramanidina voalohany fiaramanidina - tao amin'ny Ford Tri-Motor, fiaramanidina iray nitondra ny anarana hoe Tin Goose .
Nankany amin'ny alahady maraina izy ireo mba hijery ilay fiaramanidina rehefa nanolotra azy ireo ny fiaramanidina. Na dia faly aza i Neil, ny reniny dia nandidy azy ireo ho an'ny fiangonana tsy hita.
Ny renin'i Armstrong dia nividy ny kitapony voalohany mba hananganana fiaramanidina modely, saingy io no fiandohany ho azy. Nanao modely maro izy, avy amin'ny kitapo sy fitaovana hafa ary nianatra ny fomba hanatsarana azy ireo. Nanangana tavoahangin'ny rivotra tao amin'ny trano fonenany izy tamin'ny farany mba handinihana ny fiovan'ny rivotra sy ny fiantraikany amin'ny modely. Nahazo vola i Armstrong mba handoavana ny modely sy ny gazetiny momba ny fiaramanidina amin'ny fanaovana asa tsy mahazatra, mambom-bozaka, ary miasa ao amin'ny bakery.
Saingy naniry ny hanidina ny fiaramanidina tena izy i Armstrong ary nandresy lahatra ny ray aman-dreniny hamela azy handray lesona amin'ny fiaramanidina rehefa nitodika izy 15. Nahazo vola tamin'ny lesona izy tamin'ny niasa tao amin'ny tsena, nanao famandrihana ary bolantany tao amin'ny fivarotam-panafody. Tamin'ny faha-16 taonany dia nahazo ny fahazoan-dàlany izy, alohan'ny nahazoany fahazoan-dàlana hitondra fiara.
Miala amin'ny ady
Tany amin'ny sekoly ambaratonga faharoa, nametrahan'i Armstrong ny fianarany ny teknikan'ny fiaramanidina, saingy tsy azony antoka ny fahafahan'ny fianakaviany hianatra. Nianatra izy fa ny tafika an-dranomasin'i Etazonia dia nanolotra vatsim-pianarana ho an'ireo mpianatra izay vonona ny hiditra ny serivisy. Nangataka izy ary nahazo vatsim-pianarana.
Tamin'ny taona 1947, niditra tao amin'ny Oniversiten'i Purdue any Indiana izy.
Taorian'ny roa taona monja tany, nantsoina hoe fiaramanidina fitaterana an'habakabaka ao Pensacola, Florida, i Armstrong, satria teo an-tampon'ny ady tany Korea ny firenena . Nandritra ny ady, dia nisafidy fiaramanidina miisa 78 izy tamin'ny ampahany tamin'ilay mpilalao ady totohondry voalohany.
Miorina amin'ny fiaramanidina mpiady USS Essex , ireo birao dia mikendry tetezana sy orinasa. Raha nanilika ny fiaramanidina fiarovan-tenan'ny fiaramanidina, ny fiaramanidin'i Armstrong dia indroa nalemy. Indray mandeha izy dia tsy maintsy niasa sy namihina ny fiaramanidina. Fotoana iray hafa nahafahany nanidina fiaramanidina simba ho any amin'ny mpivarotra. Nahazo meday telo noho ny herim-pony izy.
Tamin'ny taona 1952, i Armstrong dia afaka niala ny tafika ary niverina tany Purdue, izay nahazoany ny BS tao amin'ny Aeronautical Engineering tamin'ny Janoary 1955. Raha teo izy dia nihaona tamin'i Jan Shearon, mpiara-mianatra aminy; tamin'ny 28 Janoary 1956, dia nanambady izy ireo.
Nanan-janaka telo izy ireo (ankizilahy roa sy ankizivavy), fa ny zanany vavy kosa dia maty tamin'ny fahatelo tamin'ny taonan'ny atidoha.
Misedra ny fetran'ny vitamina
Tamin'ny taona 1955, i Neil Armstrong dia nanatevin-daharana ny Labis Flight Propulsion Laboratorry tao Cleveland, izay anisan'ny Komity Nasionaly Mpanolo-tsaina momba ny Aretin'ny Fikarohana momba ny Aeronautics (NACA). (NACA no mpialoha lalana ny NASA.)
Fotoana fohy taorian'izay, dia nandeha tany amin'ny Edwards Air Force Base tao Californie i Armstrong mba handefa fiaramanidina fanandramana sy fiaramanidina an-tsambo. Amin'ny maha pilotan'ny fikarohana, pilotan'ny test, sy injeniera, dia saro-kenatra i Armstrong, vonona ny handray risika, ary afaka mamaha olana. Nampitomboiny ny fiaramanidina fitaterana fingotra, ary nanampy an'i Edwards nanampy azy hamaha ny olana ateraky ny famolavolana ny habaka.
Nandritra ny androm-piainany, Neil Armstrong nanidina karazana rivotra maherin'ny 200 sy space: fiaramanidina, gidro, helikoptera, ary fiaramanidina mitaingina haingam-pandeha. Anisan'ireo fiaramanidina hafa, nanidina ny X-15, Armstrong, fiaramanidina an-jatony. Nianjera tamin'ny fiaramanidina efa nivezivezy izy, nandeha fiaramanidina 3989 kilaometatra isan'ora izy - avo dimy heny ny haavon'ny feo.
Raha tany Kalifornia izy dia nanomboka mari-pahaizana Master of Science tao amin'ny Aerospace Engineering avy ao amin'ny University of Southern California. Nahavita ny degreany izy tamin'ny taona 1970 - taorian'ny nandehanany tamin'ny volana.
Tamin'ny 1957, dia nanangana an'i Sputnik , ny sata voalohan'ny artifisialy, ny Firaisana Sovietika, ary nihovotrovotra i Etazonia ka nirodana ny ezak'izy ireo mba hahatratra ny sisin-tany.
Ny NASA dia nanao drafitr'asa telo napetraka, nikendry ny hitarika lehilahy iray amin'ny volana:
Mercury - fiara iray misambotra misidina enina (1961-1963)
Gemini - fiara roa-lehilahy izay nanidina misiona folo (1965-1966)
Apollo - fiara telo lahy izay nandositra iraka iraisana iraisana (1968-1975)
Tamin'ny taona 1959, niangavy ny NASA i Neil Armstrong raha toa ka efa hifidy ireo lehilahy izay ho anisan'ireo fanadihadiana ireo. Na dia tsy voafidy ho iray amin'ireo "The Seven" (vondrona voalohany niofana ho an'ny toerana) aza izy ireo, fony ny vondrona faharoa mpanamory sambon-tany, "The Nine," no nofidiana tamin'ny 1962, dia i Armstrong no anisan'izy ireo. Ny fifidianana Mercury dia niafara, saingy nampiofana azy ho amin'ny dingana manaraka.
Ny Gemini (midika hoe kambana) Tetik'asa dia nandefa ekipa roa-olombelona teo amin'ny tadin'ny tany folo heny. Ny tanjon'izy ireo dia ny hitsapana fitaovana sy fomba fitsaboana ary hampiofana mpitaingin-tsoavaly sy ny tarika zana-tany mba hiomanana amin'ny lalana mankany amin'ny volana.
Anisan'io fandaharana io i Neil Armstrong sy David Scott tamin'ny 19 Martsa 1966. Nanamboatra ny Gemini 8 izy ireo tamin'ny 16 Martsa 1966. Ny andraikitr'izy ireo dia ny hanisy fiarandalamby voapetaka amin'ny satelita izay efa mihodidina ny tany. Ny satelita Agena no lasibatra ary i Armstrong dia nitaingina azy; Ity no fotoana voalohany nanaovan'ny fiara roa an-habakabaka.
Nandeha tsara ny iraka hatramin'ny 27 minitra taorian'izay rehefa nifampitaona ny satelita ary ny Gemini dia nanomboka nitsoaka. Afaka namongotra ny Armstrong, saingy nihodina haingana sy haingana ny Gemini , ary nifarana tamin'ny revolisiona iray isan-tsegondra. Nihazona ny tony sy ny fahaizany i Armstrong ary afaka nitondra ny asany teo ambany fanaraha-maso ary nandrahoany ny tany. (Tapa-kevitra ny farany fa tsy misy ny famolavolana roalahy.
8 ny Gemini dia nanao tsinontsinona ary nirehitra foana.)
Apollo 11: fitsanganana amin'ny volana
Ny fandaharan'asa Apollo NASA no vato ifaharan'ny asa nanirahana azy: hametrahana ny olona amin'ny volana ary hitondra azy ireo soa aman-tsara any an-tany. Ny lozam-piaramanidina Apollo, izay tsy lehibe lavitra noho ny trano fisakafoanana, dia natsangan'ny rocket goavam-be iray.
Apollo dia nitondra mpitaingin-tsoavaly telo niditra an-tsambo manodidina ny volana, fa ny roa tamin'ireo lehilahy ihany no hitondra ny modely fanataterana an'habakabaka mandra-pahatongan'ny volana. (Ilay lehilahy fahatelo dia manohy mikaroka ao amin'ny baikon'ny baiko, haka sary sy hiomana amin'ny fiverenan'ny volana avy any amin'ny tany.)
Ny ekipa efatra Apollo (Apollo 7, 8, 9 ary 10) dia nandramana fitaovana sy fomba fitsaboana, saingy ny ekipa izay tena tany amin'ny volana dia tsy voafidy hatramin'ny 9 janoary 1969 rehefa nanambara ny NASA fa i Neil Armstrong, Edwin "Buzz" Aldrin, Jr. , Ary i Michael Collins dia nanidina ny tany Apollo 11 tamin'ny volana.
Fientanentanana nipoitra tahaka ireo lehilahy telo niditra tao amin'ny kapsule teo an-tampon'ny fiaramanidina nanomboka ny marainan'ny 16 Jolay 1969. Nisy fanombohana izay nanomboka, "Ten ... sivy ... valo ..." manomboka amin'ny zero, rehefa Nihodina tamin'ny 9:32 maraina ilay fiolahana. Nandefa ny lalambe teny an-dalana ny dingana fahatelo tao amin'ny onja Satin , ny dingana tsirairay nandao ny fandaniana. Olona iray tapitrisa no nijery ny famoahana avy tany Florida ary maherin'ny 600 tapitrisa no nijery tamin'ny fahitalavitra.
Taorian'ny fiaramanidina efatra andro sy ny arivoarivo manodidina ny volana, i Armstrong sy i Aldrin dia niala tsy lavitra an'i Columbia ary, niaraka tamin'ny fakantsary fahitalavitra nandefa siantifika niverina ety an-tany, dia nanidina ny sivy kilaometatra mandra-pahatongan'ny volana. Tamin'ny 3:17 hariva (ora Houston) tamin'ny 20 Jona 1969, dia nihiaka izy ireo hoe: "Niantsona ny voromahery."
Ora iray mahery taty aoriana, dia nidina ny tohatra i Neil Armstrong, tao anatin'ny habakabaka midadasika, ary nanjary lehilahy voalohany nandia tany ivelany. Nomen'i Armstrong avy eo ny fanambarany mahagaga:
"Dingana kely iray ho an'ny lehilahy, goavana iray goavana ho an'ny olombelona" (Fa nahoana?)
Tokony ho 20 minitra taty aoriana, dia nanatevin-daharana an'i Armstrong i Aldrin. I Armstrong dia nandany ora roa sy tapany ivelan'ny modely lunar, nanamboatra sainam-pirenena amerikana, naka sary, ary nanangona fitaovana hiverina hianatra. Niverina tany amin'ny Eagle indray ireo mpanamory sambondanitra roa ireo.
Nandritra ny adiny roa sy sasany sy tapany taorian'ny nandehanany tany amin'ny volana, i Armstrong sy Aldrin dia namerina niverina tany Columbia ary nanomboka ny dia niverina tany an-tany. Tamin'ny 12:50 alina tamin'ny 24 Jolay, nipoaka ny Columbia tany amin'ny Oseana Pasifika, toerana izay noraisin'ireo lehilahy telo ireo helikoptera.
Satria tsy mbola nisy hatramin'izay ny volana teo aloha, niahiahy ny mpahay siansa fa mety ho voatery niverina tamin'ny kanserany tsy fantatra avy amin'ny habakabaka ireo mpanamory sambondanitra; Noho izany, i Armstrong sy ireo hafa dia efa voafaritra nandritra ny 18 andro.
Ireo mpilalao baolina kitra telo dia mahery fo. Niarahaba ny filoha amerikana Richard Nixon izy ireo , nankalaza ny fankalazana tao New York, Chicago, Los Angeles ary tanàna hafa any Etazonia sy manerantany.
Nomen'i Armstrong ny Medaly Adidin'ny Fahalalahana sy ny fankasitrahana maro hafa. Anisan'ireo fanomezam-boninahitra azony izy ireo dia ny Medaly Adidin'ny Fahalalahana, ny Medaly volamena, ny medaly volamena, ny medaly fandriam-bahiny, ny medaly fandihizan'ny klioba, ny Trophy Memorial Robert A. Goddard, ary ny Medaly Service Distinguished Service NASA.
Nandefa iraka an-jatony maromaro fanampiny tao amin'ny programa Apollo aorian'ny Apollo 11. Na dia tsy nahomby aza ny Apollo 13 ka tsy nisy ny tany, dia nisy mpanamory sambon-danitra folo hafa nanatevin-daharana ilay fiara kely tamin'ny mpandeha an-tongotra.
Nanohy ny asan'ny NASA hatramin'ny taona 1970 i Armstrong, ary nanao asa maro isan-karazany, anisan'izany ny Mpitantana ny Mpanolo-tsainy ho an'ny Aeronautics any Washington, DC. Rehefa nipoaka ny Challenger Space Shuttle fotoana fohy taorian'ilay fanesorana tamin'ny 1986, dia voatendry ho filoha lefitry ny komisionan'ny filoham-pirenena i Armstrong hanadihady ny loza.
Teo anelanelan'ny taona 1971 sy 1979, i Armstrong dia profesora momba ny teknolojia momba ny haisoratra ao amin'ny Oniversiten'i Cincinnati. Nifindra tany Charlottesville, any Virginia, i Armstrong mba ho mpitantana ny Computing Technologies for Aviation, Inc. nanomboka tamin'ny 1982 ka hatramin'ny 1991.
Taorian'ny 38 taona nanambadiana, dia nisaraka i Neil Armstrong sy i Jan vadiny tamin'ny 1994. Tamin'io taona io, dia nanambady an'i Carol Held Knight, tamin'ny 12 Jona 1994, tany Ohio izy.
Tia mozika Armstrong, nitohy nitendry ny anjombona baritone raha mbola tany amin'ny sekoly ambaratonga faharoa, ary namorona vondrona jazz mihitsy aza. Amin'ny maha-olon-dehibe azy dia nampiantrano ny namany tamin'ny pianô jazz sy tantara mahatsikaiky izy.
Taorian'ny nialàn'i Armstrong ny NASA, dia mpitondra tenin'ny orinasa amerikana samihafa izy, indrindra ho an'i Chrysler, General Tire, ary Bankers Association of America. Nanatona azy ny antoko politika mba hihazona birao saingy nolaviny izany. Zaza saro-kenatra izy ary nankasitraka ny zava-bitany, nanantitrantitra izy fa ny ezaka ataon'ny ekipa dia fanalahidy.
Ny fiheveran'ny tetibola sy ny fihenan'ny fahalianan'ny vahoaka dia nitarika ny politikan'ny filoha Barack Obama hampihenana ny NASA ary hampirisika ny orinasa tsy miankina hametraka fiaramanidina. Tamin'ny 2010, nibitsika i Armstrong tamin'ny "famandrihana be loatra" ary nanasonia ny anarany, niaraka tamin'ireo olona roa ambinifolo teo aloha niaraka tamin'ny NASA, ho an'ny taratasy iray izay nantsoina ny volavolan-dRamatoa Obama ho "soso-kevitra diso izay manery ny NASA hiala amin'ny tontolon'ny mahaolona ho an'ny hoavy azo jerena. *
Ny 7 aogositra 2012, nodidiana i Neil Armstrong mba hanamaivana ny fandosiran'ny aron-koditra voasakana. Maty noho ny zava-tsarotra izy tamin'ny 25 Aogositra 2012 teo amin'ny faha-82 taonany. Niparitaka tany amin'ny Oseana Atlantika ny lavenony tamin'ny 14 Septambra, andro iray taorian'ilay fanomezam-boninahitra fahatsiarovana natao ho fanomezam-boninahitra azy tao amin'ny Katedralin'ny Washington National. (Iray amin'ireo varavarankely vita amin'ny fitaratra misy ny katedraly no misy ny vatolampy iray volana mitondra ny ekipa Apollo 11 eto an-Tany.)
Ilay Amerikana Maherifo
Ny idealy Amerikanina izay tokony ho endrika maherifo dia tokony horaisina ho toy ny nalaza tao amin'io lehilahy Midwesty tsara tarehy io. Neil Armstrong dia hendry sy niasa mafy ary natokana ho an'ny nofinofiny. Avy any amin'ny fiaramanidina voalohany nahitana fiaramanidina nanao fampisehoana ny Air Show tao Cleveland, te-haka ny lanitra izy. Rehefa avy nibanjina ny lanitra izy ary nianatra ny volana tamin'ny teleskaopy mpifanolo-bodirindrina, dia nanonofy izy fa anisan'ny fandalinana ny habakabaka.
Ny nofinofin-janany sy ny fanirian'ny firenena dia niara-niasa tamin'ny 1969 rehefa nandray ny "dingana kely ho an'ny olombelona" i Armstrong tamin'ny volana.
* Todd Halvorson, "Milaza Ny Volokano Mandroaka Amin'ny Fepetrahan'i NASA Ao Etazonia" Etazonia. 25 Aprily 2014. [http://usatoday30.usatoday.com/tech/science/space/2010-04-14-armstrong-moon_N.htm]
Raymond avy any Toulouse
Max Planck dia mamaritra ny teoria Quantum
Ny tantaran'i Andy Warhol
Tantaran'ny raharaha Sacco sy Vanzetti
Lisitry ny State of Public Schools, K-12
Ny ankamaroan'ny mpilalao dia mahazo ny Tour de France
Ahoana no fomba hanaovana ny vavaka islamika isan'andro
Top 10 Interview Questions Questions
Ny firenena malaza indrindra amin'ny toerana fizahan-tany
Fambolena alikaola ao an-tokotaninao
Gabby Douglas Sary: Look to the Gymnastics Career Olympic Champion
Asa vita amin'ny polygon - Valiny amin'ny pejy faha-2 amin'ny PDF
Fampihorohoroana amin'ny literatiora
Ny momba ny Galaxy Whirlpool
La Ferrassie Cave (Frantsa)
"Copenhagen" avy amin'i Michael Frayn
Ny fomba hiverenana amin'ny skateboarding
Fanabeazana Zen Books
Ny olana momba ny simia ny Avogadro - Ny rano amin'ny tavy
Famaritana ao amin'ny siansa
Ny Beatles "Album de rubber" Album
9 Fanomezana vahaolana ho an'ny toetran'ny toetr'andro eo amin'ny fiainanao
Inona avy ireo karazana tandindonin-doza?